Nguwuphi umahluko phakathi kukaCalvinism kunye neArminianism? . ➡️
Nguwuphi umahluko phakathi kukaCalvinism kunye neArminianism? UCalvinism kunye neArminianism yimizila emibini yeengcinga ngaphakathi kobuKristu ukuzama ukucacisa ubudlelwane phakathi kosindiso, ulawulo lukaThixo namandla omntu okukhetha. Inkqubo ye- UCalvinism ijolise ngakumbi kulongamo lukaThixo kunye ingalo yeArminian ijolise ngakumbi kwinkululeko yokuzikhethela. IBhayibhile iyathetha ngazo zombini.
1 Imvelaphi yengxoxo
2 Nguwuphi umahluko phakathi kukaCalvinism kunye neArminianism?
3 Yeyiphi echanekileyo?
UCalvinism kunye neArminianism yavela ngaxeshanye. UCalvinism usekelwe kwiingcamango zendoda egama linguCalvin UJohn Calvin kwaye iArminianism isekwe kwiingcinga zika UJacob Arminius. Abalandeli bala madoda mabini bane (kwaye basenayo) ungquzulwano ngokwahluka kwezikhundla zabo.
Xa uCalvinism waye esaziwa, abalandeli beArminianism babhala ngamanye amanqaku ababengavumelani ngawo nabalandeli bakaCalvin. Aba, nabo, bakuqinisekisa ukuma kwabo ekuphenduleni. Yaqala njalo ke impikiswano enkulu eye yaqhubeka kangangeenkulungwane ezithile.
Umahluko ophambili phakathi kukaCalvinism kunye neArminianism ngu lusebenza njani usindiso. UbuCalvin buthi asiyivoti; IArminianism ithi sinokukhetha.
UCalvinism fundisa lonto UThixo ungukumkani kwizinto zonke. Ke ngoko, ukhetha lowo afuna ukumgcina. Akukho mntu unokuzisindisa ngokuzithandela, kuba sonke sibanjwe sisono. Kodwa uThixo unika ukholo oluya kusindiswa. Akukho namnye uThixo amkhethileyo onokumelana nosindiso; bonke baya kugcinwa ngokunyanzelwa.
ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe, awathi ngalo wasenza samkeleka kuye Oyintanda »
Kwabase-Efese 1: 4-6
U-Arminianism yamkela ulawulo lukaThixo kwaye akukho namnye umntu onokuzisindisa ngemizamo yakhe. UThixo usinika usindiso simahla, kodwa kananjalo unika umntu ngamnye ukhetho. Akukho mntu unyanzelekileyo ukuba akholwe aze asindiswe.
Omnye umahluko kukuba uYesu weza kusindisa. Inkqubo ye- UCalvinism ufundisa ukuba uYesu wafa kuphela ukusindisa abanyuliweyo, ukuba uThixo ubanyule ukuba babe nokholo. Inkqubo ye- IArminianism ifundisa ukuba uYesu wafela bonke abantu, kodwa ngabo bakholwayo kuphela abaya kusindiswa.
Nangona kunjalo, uninzi Abalandeli bakaCalvin abakholelwa ukuba "singonodoli" bakaThixo. Bayayamkela into yokuba sinamandla okwenza izigqibo, kodwa hayi ngokosindiso. Uninzi lwabalandeli be IArminianism nayo ayikholelwa ukuba sisindiswa yimisebenzi okanye ngokufaneleka. Bayayamkela into yokuba usindiso luphuma kuThixo; ngokulula sinamandla okwala olo sindiso.
Phakathi kwabalandeli bakaCalvin kunye nabaxhasi beArminianism kukho mpikiswano malunga nokuba kunokwenzeka ukuba ikholwa liphulukane nosindiso. Inkqubo ye- UbuCalvinism abunakwenzeka. Kwelinye icala, iArminianism ithi inokwenzeka, kodwa akukho siqinisekiso.
Akukho mpendulo icacileyo kulo mbuzo. Ibhayibhile ithi uThixo ungumphathi wezinto zonke, kodwa sikhululekile ukwenza izigqibo. Akukho nto eyenzekayo ngaphandle kwemvume kaThixo, kodwa nabantu benza izinto ezingafunwayo nguThixo.
Umbuzo wosindiso uyafana nombuzo wenkukhu kunye neqanda. Yiyiphi eya kuqala? Kukuthanda kukaThixo okanye ukholo? IBhayibhile ayiphenduli! UThixo akaphelelanga kwimithetho yexesha, ngaphambi nasemva. Ngonaphakade kwaye unokubuyela umva, uye phambili nangaliphi na icala ngexesha. Ngaba kusengqiqweni ukuzama ukucacisa isenzo sikaThixo ngokwasenyameni?
Ibhayibhile ithi UThixo unolawulo lwento yonke. Kodwa, kulawulo lwakhe, kusivumela ukuba senze izigqibo. Silumkisiwe ukuba singalugatyi usindiso uThixo asinika lona, ​​kodwa siqinisekile ukuba uThixo uyakusigcina elukholweni.
Es akunakwenzeka ukuba uxele ukuba icala elinye lilungile, ngoba ibhayibhile ayicacisi. Umzekelo, ivesi kaYohane 3:16, Ingasetyenziselwa ukungqina ukuba u Yesu wafela kuphela abanyuliweyo abakholwayo kwanokungqina ukuba u Yesu wafela bonke kodwa ngabo bakholwayo kuphela abasindisiweyo njengoko ivesi isitsho nje ukuba abo bakholwayo kuYesu bayakusindiswa kwaye abajolisanga olu hlobo lweenkcukacha.
Ngelishwa, kuhlala kusenzeka ukuba umntu obonakala enokholo amshiye uYesu. Ngokutsho kukaCalvinism, lo mntu zange waba nokholo lokwenene, ke ayizukugcinwa. Ngokwe-Arminianism, oku kunokuba bubungqina bokuba kunokwenzeka ukuba uphulukane nosindiso ukuba umntu ufuna ngokwenene ukwala uYesu.
Ibhayibhile ithi abanye abantu bayamzama uYesu, kodwa emva koko bamgatye. Nangona kunjalo, ayitsho ukuba aba bantu bayakusindiswa okanye hayi. Ke ngoko, eyona nto ibalulekileyo ingunaphakade.
Kuba akunakwenzeka ukuba abo babekhe bakhanyiselwa kwaye bangcamla isipho sasezulwini, baba nenxaxheba kuMoya oyiNgcwele,
Baze balithanda nelizwi likaThixo, kunye namandla exesha elizayo,
babuya ke, baphinda bahlaziyelwa enguqukweni, bezibethela emnqamlezweni uNyana kaThixo, bemtyhilela ukufezekiswa.
Hebhere 6: 4-6
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kuwe yintoni umahluko phakathi kwecalvinism kunye ne-arminianism. Ukuba ngoku ufuna ukwazi yintoni umahluko ophambili phakathi kwamaKatolika namaProtestanti, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-Intanethi.